Burmese translation from Russell Kyaw <russellkyaw@gmail.com> (724bd70f) · Commits · Plugins / pidgin-otr · GitLab
authored Jul 01, 2012 by Ian Goldberg
Burmese translation from Russell Kyaw <russellkyaw@gmail.com>
View file @ 724bd70f
﻿# Copyright (C) 2004-2012 Ian Goldberg, Rob Smits, Chris Alexander, Willy Lew,
#	Lisa Du, Nikita Borisov
"Project-Id-Version: pidgin-otr 4.0.0.XX\_n"
"POT-Creation-Date: 2012-06-14 09:45-0400\_n"
"PO-Revision-Date: 2012-07-01 22:01+0530\_n"
"Last-Translator: Russell Kyaw<russellkyaw@gmail.com>\_n"
"Language-Team: MM L10N Team <mm.l10n.team@gmail.com>\_n"
msgstr "သင့်မိတ်ဆွေသည် သူခေါ်နေသော သူသည် သင်တကယ် ဟုတ်မဟုတ်၊ (သို့) တစ်စုံတစ်ယောက်သည် သင့်အယောင်ကို ဆောင်မဆောင် စစ်ဆေးရန် ကြိုးစားနေသည်။ သင့်မိတ်ဆွေသည် အောက်ပါအတိုင်း သင့်ကို မေးခွန်း တစ်ပုဒ်​ မေးနေသည်။ သင့်​မိတ်ဆွေကို အတည်ပြုရန်၊ အဖြေကို ရေးထည့်ပြီး ကောင်းပြီ ကို နှိပ်ပါ။"
msgstr "​မေးခွန်း တစ်ပုဒ်ကို အသုံးပြုပြီး အတည်ပြုရန်၊ သင်နှင့် သင့်မိတ်ဆွေတို့ကသာ အဖြေ သိရှိသော မေးခွန်း တစ်ပုဒ်ကို ရွေးပါ။ ဤမေးခွန်းနှင့် အဖြေကို ရေးထည့်ပြီး၊ သင့်မိတ်ဆွေက အဖြေကို ရေးထည့်ရန် စောင့်ဆိုင်းပါ။ အကယ်၍ အဖြေ ကိုက်ညီမှု မရှိပါက၊ သူ့ကို ​အယောင်ဆောင်သူ တစ်ဦးအဖြစ် သတ်မှတ်နိုင်သည်။"
msgstr "ဤမေးခွန်းသည် သင့်မိတ်ဆွေ မေးသော မေးခွန်း ဖြစ်သည် -"
msgstr "ဤနေရာ၌ မေးခွန်း ရေးပါ -"
msgstr "သင့် မိတ်ဆွေကို စစ်ဆေး အတည်ပြုလိုက်ပြီ။"
msgstr "လျှို့ဝှက် အဖြေကို ဤနေရာ၌ ရေးထည့်ပါ (အမှားမခံ) -"
msgstr "အတည်ပြုနိုင်ရန်၊ သင်နှင့် သင့်မိတ်ဆွေတို့ကသာ သိရှိသော လျှို့ဝှက်ချက် တစ်ခုကို ရွေးပါ။ ဤလျှို့ဝှက်ချက်ကို ရေးပြီးနောက်၊ သင့် မိတ်ဆွေလည်း ၄င်းကို ရေးသည့်အထိ စောင့်ဆိုင်းပါ။ အကယ်၍ လျှို့ဝှက် မကိုက်ညီပါက၊ သူ့အယောင်ဆောင်သော သူကို စကားပြောနေခြင်း ဖြစ်နိုင်သည်။"
msgstr "ဤနေရာ၌ လျှို့ဝှက်ချက် ရေးထည့်ရန် -"
msgstr "လက်ဗွေကို စစ်ဆေး အတည်ပြုရန်၊ သင့် မိတ်ဆွေကို တယ်လီဖုန်း (သို့) GPG-လက်မှတ်ထိုးထား​သော အီးမေးလ် စသည်ဖြင့် စစ်ဆေး အတည်ပြုသော <i>အခြား</i> လမ်းကြောင်း မှတစ်ဆင့် ဆက်သွယ်ပါ။ သင်တို့ တစ်ဦးကို တစ်ဦး မိမိတို့၏ လက်ဗွေကို ပြောပြရမည် ဖြစ်သည်။"
msgstr "အကယ်၍ အားလုံး ကိုက်ညီပါက၊ အောက် မီနူးရှိ <b>ကျွန်တော့်ဆီ ရှိသည်</b> ကို ရွေးပါ။"
"သင့်အတွက် လက်ဗွေ၊ %s (%s):\_n"
"​​အယောင်ဆောင် လက်​ဗွေ ပိုင်ရှင် %s:\_n"
msgstr "သင့်မိတ်ဆွေကို မည်ကဲ့သို့ စစ်ဆေး အတည်ပြုမည်နည်း?"
msgstr "မေးခွန်းနှင့် အ​ဖြေ"
msgstr "မျှဝေထားသော လျှို့ဝှက်ချက်"
msgstr "လက်ဗွေကို ကိုယ်တိုင် အတည်ပြုခြင်း"
msgstr "အတည်ပြုခြင်း (_A)"
msgstr "မိတ်ဆွေ တစ်ဦးကို စစ်​ဆေး အတည်ပြုခြင်းဖြင့် သင်နှစ် စကားပြောနေသူသည် သင်ရည်ရွယ်ထားသော ပုဂ္ဂိုလ် အမှန် ဖြစ်ကြောင်း သေချာစေသည်။"
msgstr "မိတ်ဆွေကို စစ်ဆေး အတည်ပြုရန်"
msgstr "မိတ်ဆွေကို အတည်ပြုနေသည်"
msgstr "%s ကို အတည်ပြုနေသည်"
msgstr "မိတ်ဆွေကို စောင့်ဆိုင်းနေသည်..."
msgstr "Private key ကို ထုတ်လုပ်နေသည်"
msgstr "ခေတ္တ စောင့်ဆိုင်းပါ"
msgstr "%s (%s) အတွက် private key ထုတ်လုပ်နေသည်..."
msgstr "%s ကို ပြီးသွားပြီ။"
msgstr "%s သည် အမည်မသိသော ကွန်ပျူတာမှ သင့်ကို ဆက်သွယ်နေသည်။ ဤမိတ်ဆွေကို <a href=\_"%s%s\_">စစ်ဆေး အတည်ပြု</a>ပါ။"
msgstr "%s ကို စစ်ဆေး အတည်ပြုခြင်း မလုပ်သေးပါ။ ဤမိတ်ဆွေကို <a href=\_"%s%s\_">စစ်ဆေး အတည်ပြု</a> ပါ။"
msgstr "ကျွန်တော့်ဆီ မရှိပါ"
msgstr "ကျွန်တော့်ဆီ ရှိသည်"
msgstr "ဤအ​ရာသည် မှန်ကန်ကြောင်း အတည်ပြုသည်"
msgstr "%s အတွက် လက်ဗွေ။"
msgstr "%s အတွက် လက်ဗွေကို အတည်ပြုပါ"
"</i></small>သင့်အတွက် လက်ဗွေ၊ %s (%s):\_n"
"​အယောင်ဆောင် လက်ဗွေပိုင်ရှင် %s:\_n"
msgstr "အကယ်၍ အရာအားလုံး ကိုက်ညီပါက၊ အထက်ပါ အညွှန်း စာမျက်နှာရှိ လက်ဗွေကို သင် အတည်ပြု<b>လိုက်ပြီ</b>၌ အမှတ်အသား ပြုလိုက်ပါ။"
msgstr "လက်ဗွေ အတည်ပြုပါ"
msgstr "%s မှ အတည်ပြုချက်"
msgstr "%s ကို အတည်ပြုရန်"
msgstr "မိတ်ဆွေကို အတည်ပြုရန်"
msgstr "စစ်ဆေး အတည်ပြုနေစဉ် ချို့ယွင်းချက် တစ်ခု ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။"
msgstr "အတည်ပြုခြင်း အောင်မြင်သည်။"
msgstr "သင့်မိတ်ဆွေသည် သင့်ကို အောင်မြင်စွာ အတည်ပြုလိုက်ပြီ။ သင့်ကိုယ်တိုင် မေးခွန်းဖြင့်လည်း သင့်မိတ်ဆွေကို စစ်ဆေး အတည်ပြုနိုင်သည်။"
msgstr "အတည်ပြခြင်း မအောင်မြင်ပါ။"
msgstr "%s နှင့် သီးသန့် စကားပြောဆိုမှု စတင်သည်။%s%s"
msgstr "%%s နှင့် <a href=\_"%s%s\_">အတည်မပြုရသေး</a>သော စကားပြောဆိုမှု စတင်သည်။%%s%%s"
msgstr "%s နှင့် သီးသန့်မဟုတ်သော စကားပြောဆိုမှု စတင်သည်။%s%s"
msgstr "သတိပေးချက် - ပရိုတိုကော ဗားရှင်း အဟောင်း ၁ ကို သုံးစွဲနေသည်။"
msgstr "သင့်မိတ်ဆွေသည် ဤစကားပြောဆိုမှုထဲ ၀င်ရောက်လာ်သည်။"
msgstr "သင့်မိတ်ဆွေသည် ဤစကားပြောဆိုမှုထဲ ၀င်မ​လာပါ။"
msgstr "သင့်မိတ်ဆွေသည် အကြိမ်ကြမ် ၀င်ရောက်လာပြီး OTR <a href=\_"%s%s\_">စကား​ပြောမှု အများ</a> ဖန်တီးနေသည်။ စကားပြောဆိုမှု အထွက်ကို ရွေးချယ်လိုပါက အထက်မှ အိုင်ကွန် ​မီနူးကို သုံးစွဲပါ။"
msgstr "%s နှင့် သီးသန့် စကားပြောဆိုမှု ပျက်သွားသည်။"
msgstr "%s သည် သင်နှင့် သီးသန့် စကားပြောဆိုမှုကို အဆုံးသတ်လိုက်သည်။ အလားတူ သင် ပြုလုပ်ပါ။"
msgstr "%s နှင့် သီးသန့် စ​ကား​ပြောဆိုမှုကို အောင်မြင်စွာ ပြန်ခေါ်လိုက်ပြီ။%s"
msgstr "<a href=\_"%s%s\_">အတည်မပြုသေး</a>သော %%s နှင့် စကားပြောဆိုမှုကို အောင်မြင်စွာ ပြန်ခေါ်လိုက်ပြီ။%%s"
msgstr "%s နှင့် သီးခြား မဟုတ်သော စကားပြောဆိုမှုကို အောင်မြင်စွာ ပြန်ခေါ်လိုက်ပြီ။%s"
msgstr "%s သီးသန့် စကားပြောဆိုမှုကို ပြန်ခေါ်ရန် ကြိုးစားနေသည်..."
msgstr "%s နှင့် သီးသန့် စကားပြောဆိုမှု စတင်ရန် ကြိုးစားနေသည်..."
msgstr "သီးသန့် စ​ကားပြောဆိုမှု စတင်ရန် (_p)"
msgstr "သီးသန့် ​စ​ကားပြောဆိုမှု ပြန်ခေါ်ရန် (_p)"
msgstr "မိတ်ဆွေကို ပြန်လည် အတည်ပြုရန် (_a)"
msgstr "မိတ်ဆွေကို အတည်ပြုရန် (_A)"
msgstr "ဒါဘာလဲ? (_W)"
msgstr "သီးသန့် စကားပြောဆိုမှု အဆုံးသတ်ရန် (_E)"
msgstr "သတိပေးချက် - ရွေးထားသော OTR လိုင်းအထွက် (%u) သည် လက်ရှိ သက်၀င်မှု အရှိဆုံး (%u) မဟုတ်ပါ။ သင့် မိတ်ဆွေသည် သင့် စာတိုပေးပို့ချက်များကို မရရှိပဲ နေနိုင်သည်။ အခြား လိုင်းအထွက်များကို ရွေးရန် အထက်မှ အိုင်ကွန် ​မီနူးကို ​သုံးစွဲပါ။"
msgstr "လုံခြုံမှု အရှိဆုံးစနစ်ဖြင့် ပေးပို့ရန်"
msgstr "လက်ငင်း ပေးပို့ပါ"
msgstr "%u လုပ်ဆောင်မှု"
msgstr "လက်ရှိ စကားပြောဆိုချက်၏ သီးသန့်ရပ်တည်မှု အနေအထား - <a href=\_"%s%s\_">%s</a>"
msgstr "OTR စာတိုပေးပို့ခြင်း"
msgstr "လက်ဗွေ - %.80s"
msgstr "ကီး မရှိပါ"
msgstr "အကောင့် မရှိပါ"
msgstr "သုံးစွဲခြင်း မပြုပါ"
msgstr "သီးသန့် စာပိုပေးပို့ခြင်း စတင်ရန်"
msgstr "သီးသန့် စာတိုပေးပို့ခြင်းကို အလိုအလျောက် အစပြုရန်"
msgstr "သီးသန့် စာတိုပေးပို့ရန် လိုအပ်သည်"
msgstr "OTR စကားပြောဆိုချက်ကို မှတ်တမ်း မတင်ရန်"
msgstr "OTR ခလုတ်ကို တူးဘား၌ ဖေါ်ပြရန်"
msgstr "ကျွန်တော့် private keys များ"
msgstr "အကောင့်၌ သုံးသော ကီး -"
msgstr "ပုံမှန် OTR ချိန်ညှိချက်များ"
msgstr "OTR UI ရွေးစရာများ"
msgstr "သီးသန့် ​စ​ကားပြောဆိုမှု စတင်ရန်"
msgstr "သီးသန့် စကားပြောဆိုမှု အဆုံးသတ်ရန်"
msgstr "လက်ဗွေ မေ့နေသည်"
msgstr "သိ​ထားသော လက်ဗွေများ"
msgstr "OTR ချိန်ညှိချက်များ"
msgstr "%s အတွက် OTR ချိန်ညှိချက်များ"
msgstr "ဤမိ​တ်ဆွေအတွက် ပုံမှတ် OTR ချိန်ညှိချက်များ သုံးစွဲရန်"
msgstr "သင်သည် လောလောဆယ် အကောင့် %s (%s) နှင့် ဆက်သွယ် မထားပါ။"
msgstr "ဖိုင်အမည် ပြုလုပ်ရာတွင် မှတ်ဉာဏ် ကုန်သွားသည်။\_n"
msgstr "သီးသန့် ကီးဖိုင်ကို ရေးသားခြင်း မပြုနိုင်ပါ\_n"
msgstr "အမည်မသိ အကောင့် %s (%s)။"
msgstr "အမည်မသိ အကောင့်"
msgstr "စာတိုကို စာဝှက်နေစဉ် ချို့ယွင်းချက် ဖြစ်ပေါ်နေသည်။"
msgstr "စာဝှက်ထားသော ဒေတာကို %s ထံ သင် ပေးပို့​ခဲ့သည်၊ ၄င်းကို သူ မျှော်လင့် မထားပါ။"
msgstr "သင်သည် ဖတ်ရှု၍ မရသော စာဝှက်ထား​သည့် စာကို ထုတ်လွှင့်နေသည်။"
msgstr "သင်သည် ပုံပျက်နေသော ဒေတာ စာ တစ်စောင်ကို ထုတ်လွှင့်နေသည်။"
msgstr "သင်သည် စာဝှက်မထားသော စာကို %s ထံ ပေးပို့ရန် ကြိုးစားနေသည်"
msgstr "သီးသန့် စကားပြောဆိုမှု တစ်ခုကို စတင်ရန် ကြိုးစားနေသည်..."
msgstr "OTR မူဝါဒ ချိုးဖေါက်မှု"
"ဤလက်ခံသူထံ ပေးပို့သော စာဝှက်မထားသော စာတိုများကို ခွင့်မပြုပါ။ သီးသန့် စ​ကားပြောဆိုမှု စတင်ရန် ကြိုးစားနေသည်။\_n"
"သီးသန့် စကားပြောဆိုမှု စတင်သည့်အခါ သင့်စာတိုကို ပြန်လည် ထုတ်လွှင့်ပေးမည်။"
msgstr "သင့်စာတိုကို စာဝှက်နေစဉ် ချို့ယွင်းချက် တစ်ခု ဖြစ်ပေါ်နေသည်။ ၄င်းစာတိုကို ပေးပို့ခြင်း မပြုပါ။"
msgstr "​စာတို စာဝှက်ခြင်း ချို့ယွင်းချက်"
msgstr "သင့်စာတိုကို စာဝှက်နေစဉ် ချို့ယွင်းချက် ဖြစ်ပေါ်နေသည်"
msgstr "ဤစာတိုကို ပေးပို့ခြင်း မပြုပါ။"
msgid "%s has already closed his/her private connection to you"
msgstr "%s သည် သင်နှင့် သီးသန့် စကားပြောဆိုမှုကို ပိတ်လိုက်ပြီ"
msgid "Your message was not sent. Either end your private conversation, or restart it."
msgstr "သင့်စာတိုကို ပေးပို့ခြင်း မပြပါ။ သင့် သီးသန့် စကားပြောဆိုမှုကို အဆုံးသတ်ပါ၊ သို့မဟုတ် ၄င်းကို ပြန်ဖွင့်ပါ။"
msgid "Private connection closed"